प्रचण्ड, नेपाल, देउवा देखि ठाकुर र भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा ! कस्को सम्भावना कति ? - PLA Khabar
2021-02-25 2021-02-25 Tulasi Nepal
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि देश फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिक संकटमा परेका छन् । तर, उनले राजीनामा नदिई संसदको सामना गर्ने सन्देश दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दौडमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि छन् । देउवालाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा साथ दिएमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रचण्ड र नेपालले विगतमै गरेका थिए । तर, देउवाको भुमिका स्पष्ट देखिएको थिएन । तैपनि, प्रचण्ड र नेपालको साथमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा देउवा पनि छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत साथ हुनसक्छ । प्रचण्ड र नेपाललाई रोकेर देउवासँग गठबन्धन गर्ने ओलीको रणनीति बनेको बुझिएको छ । तर, ओलीसँग मिल्न देउवालाई सजिलो छैन । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ओलीसँग समिकरण बनाउन नहुने पक्षमा उभिदै आएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । नेकपाको दुवै समूह र नेपाली काँग्रेसबीच प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप भएमा ठाकुर र भट्टराईको सम्भावना बढ्न सक्छ । ठाकुरको नाममा काँग्रेस पनि सकारात्मक बन्न सक्छ । तर, नेकपा र काँग्रेस दुवै आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्थामा छन् ।
Posted in मुख्य समाचार, राजनीति, समाचारTagged प्रधानमन्त्री
संघीयता खारेजी हुनै पर्छ र हुन्छ
जसपा अध्यक्ष ठाकुर र प्रधानमन्त्रीबीच भेट, दुई दिनभित्रै मुद्दा फिर्ता लिने प्रधानमन्त्रीको वचन
१७३६ कोरोना संक्रमित थपिए, १४ जनाको मृत्यु
९ वैशाखदेखि नेपालगन्जमा फेरि लकडाउन
नेदरल्याण्ड्सद्वारा नेपाल ३ विकेटले पराजित
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नयाँ नियम लागू
बस र ट्रक आपसमा ठोक्किँदा चालकको मृत्यु, चौबिस घाइते